MANOME ISA NY ALIKA AMIN'NY ALIKAOLA MIARAKA AMIN'NY ALIKA HAFA - ALIKA
Manome isa ny alika amin'ny alikaola miaraka amin'ny alika hafa
Hiady amin'ny alika hafa ve ity alika ity?
Ity pejy ity dia manome isa ny fanofana karazan-tsakafo hafa hiady amin'ny alika hafa. Manome isa azy ireo izany arakaraka ny ambaratongany sy ny fahaizany miady. Antony maro no milalao ao. Ao anatin'ny fako rehetra dia misy alika teraka mpanaraka sy mpitarika teraka. Raha atao teny hafa, miaraka amin'ny ambaratongam-pahefana samihafa. Na ny alika be mpanapaka indrindra aza dia afaka mifanaraka amin'ny alika hafa raha mbola asehon'ny tompony fitarihana matanjaka ary mety serasera alika amin'ny alika . Raha alika miaraka nobeazina ary mifanerasera tsara , mety ho mpinamana be izy ireo, izany dia mihatra amin'ny karazana sy alika rehetra. Na ny alika naoty ho 'Sariaka amin'ny alika hafa' aza dia mety hampijaly alika. Ny fehiny dia, isaky ny alika tsirairay dia misy ifandraisany bebe kokoa amin'ny tompony sy ny fomba nitaizana ny alika noho ny karazany, fa ny zava-misy kosa, raha miady ny alika dia maro ny karazany mpiady mahay noho ny hafa ary miaraka amin'ny tompona tsy izy ary amin'ny toe-javatra sasany, dia mety hirona amin'ny ady kokoa noho ny karazana alika na karazana alika hafa.
fampahalalana terrain fotsy any andrefana
Sariaka amin'ny alika hafa
Tsy mazoto alika amin'ny ankapobeny
Mety ho mahery setra alika
Bulldog Rà Manga Alapaha
Spaniel Cocker amerikana
Alika Eskimo Amerikanina
Terrier tsy misy volo amerikana
Mpiandry fotsy amerikana
Alika mpiandry ondry Anatolianina
Alika Cubucu Arubiana
Alika omby ostraliana
Pinscher Austrian Shorthaired
Alika omby teratany aostralianina
Groenendael mpiandry belza
Laekenois mpiandry belza
Alika Mountain Bernese
Terrier Rosiana mainty
Italiana Cane Corso
Alika Serra de Aires
Ovtcharka avy any Azia afovoany
Alika Chongqing Sinoa
Sinoa voadoka (tsy misy volo)
Collie (Masiaka sy malama)
Mpiandry ondry Dakotah
Domitius Mastiff lehibe indrindra
Alika mpiandry holandey
Alika mpiandry alemanina
Glen an'ny Imaal Terrier
Alika Mountain Mountain lehibe kokoa
Khalaesse tsy misy volo
Mpiandry ondry Islandy
Iray mena sy fotsy
Spaniel Japoney (Chin)
Lowchen (alika kely liona)
Bulldog aostralianina kely indrindra
Mpiandry aostralianina kely indrindra
Bulldog English Miniature
Mpiandry ondry Mioritika
Alika Indianina Amerikanina
Alika mihira any Nouvelle-Guinie
Sheepdog anglisy taloha (Bobtail)
Bulldogge Olde Victorian
Alika Mallorquin Presa
Orkide Inca Peroviana
Sheepdog amin'ny faritany Lowland poloney
Mpanjakavavy Elizabeth Pocket Beagle
Fox Terrier malefaka
Terateran'ny Wheaten Tery malefaka
(avy amin'ny ankavia sy ankavanana) - Ramatoa Wheezie (wee-zee) - Lab mainty / Rottweiler, Speck - Jack Russell Terrier, Master Frodo - American Pit Bull Terrier, Andriamatoa Potter - Mastiff / Retriever mix (alika kely)
Jereo ny Jack Russell Terrier ary ny American Pit Bull Terrier amin'ny sary etsy ambany. Ohatra iray amin'ny karazany roa izay mazàna manana avo kokoa ambaratonga manjaka . Fa izy ireo dia mifankahazo tsara amin'ny olona ao amin'ny fianakaviany. Ny farany, ny momba ny tompona olombelona no resahina. Ny tompon-trano dia tokony ho malina saina kokoa noho ny alika, mampiseho fahefana ampy handresena lahatra ny alika fa ny olombelona no tompon'andraikitra ary mametraka ny lalàna izay tokony harahina. Ny alika izay azo antoka amin'ny habetsahan'ny fitarihana ataon'ny olombelona dia tsy hiady amin'ny alika hafa, raha mbola afaka mampita tsara ny faniriany amin'ilay alika ny olombelona.
Master Frodo the American Pit Bull Terrier toy ny alika kely miaraka amin'i Speck the Jack Russell Terrier.
Diva efa-taona ( Dogue de Bordeaux ) ary Chase enim-bolana ( Yorshire Terrier ). Tsapan'i Chase fa ilaina ny miambina an'i Diva mandritra ny hatoriany.
Manome isa ny alika amin'ny alika amin'ny ankizy
Manome isa ny alika misy alika tsy alika
Ireo jiolahim-boto rehetra eto!
Malagasy Cocker spaniel loko Tan
afangaro chihuahua amin'ny jack russell
spaniel lohataona sy fotsy
dachshund Cocker spaniel afangaro karazany
alika miteraka izay manomboka amin'ny s